Inaad Tweet ama Aan Tweet | Martech Zone
Inaad Tweet ama Aan Tweet
Saturday, April 22, 2017 Isniin, April 24, 2017 Aadam Shigem
Hagaha bilowga ah ee go'aaminaya haddii Twitter ku habboon yahay istiraatiijiyaddaada dijitaalka ah
Ma 'helaan' isticmaaleyaashooda! Saamiyada ayaa hoos u dhacay! Waa qasan tahay! Waa dhimanaya!
Suuqleyda - iyo adeegsadayaasha - wax badan ayey haysteen cabashooyinka ku saabsan Twitter dhawaan. Si kastaba ha noqotee, iyada oo in ka badan 330 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon adduunka oo dhan, barnaamijka warbaahinta bulshada ayaa u muuqda inuu si fiican u shaqeynayo. Isticmaalku wuxuu leeyahay dardar geliyay seddex meelood oo isku xigta, oo aan la helin tartame toos ah oo toos ah, Twitter wuxuu noqon doonaa mustaqbalka dhow. Laakiin, wali sax kuma aha nooc kasta. Kanaal kasta wuxuu leeyahay xooggiisa iyo daciifnimadiisa, marka markaad tixgelinayso Twitter-ka istiraatiijiyadda dhijitaalka ah ee astaantaada ah maskaxda ku hay waxa kanaalku ku fiican yahay: isgaarsiinta tooska ah, degdegga, iyo saamileyaasha.
Sida looga faa'iideysto awooda Twitter
Xiriir toos ah - In loola dhaqmo Twitter sidii kanaal faafiya oo fudud ayaa dooranaya in la iska indhatiro xooggeeda gaarka ah: Si toos ah ula xiriirka dhagaystayaashaada shaqsi ahaan. Raadi fursado aad kula xiriirto oo aad toos ula bilowdo wadahadalka macaamiisha. Haddii kororka Alexa, Siri, iyo ganacsiga wada hadalka wuxuu ina tusayaa wax walba, waa inay dadku caadaysteen inay la hadlaan noocyada si dabiici ah. Marka, kula xiriir iyaga qaab dabiici ah kanaal loo dhisay wadahadalka.
Degdeg ah - Xididdada Twitter-ka ayaa si adag ugu dhex jira saxaafadda. Aasaasaha Jack Dorsey xitaa wuxuu amaanayaa wariyaasha iyada oo barxadda u soo caan baxday. Ka faa'iideyso tan oo u adeegso Twitter-ka dhinacyada wararka u habboon ee sumaddaada: diiradda saar ogeysiisyada, dhacdooyinka, iyo sheekooyinka socda.
Saameeyayaasha - Warshado kastaa waxay leeyihiin hogaamiye feker, Twitter-ka ayaa sahlaya in lala xiriiro. Hoggaamiyeyaasha fikirka ayaa aad iyo aad muhiim ugu ah macaamiisha: dhab ahaantii, 49% dadka isticmaala twitter-ka ku tiirsan talooyinka ka saameeyayaasha. Marka, iyaga la xiriir. Weydii su'aalaha si toos ah una dhis xiriirro siyaabo aadan waligaa uga baxsaneyn baraha bulshada.
Marka, Twitter ma u qalantaa? Waxay leedahay awoodo gaar ah oo loogu talagalay isgaarsiinta tooska ah, dareenka deg degga ah, iyo suurtogalnimada weyn ee saameynta wacyigelinta. Si dhow ugu fiirso hadafyadaada sumcadda: haddii aad hesho waddo aad uga faa’iideysato xoogga Twitter waxay qayb xoog leh ka noqon kartaa istiraatiijiyaddaada dijitaalka ah.
Waa maxay Tirooyinka Twitter ee ay tahay inaad Feejignaato?
Okay, waxaad go'aansatay inaad u isticmaasho Twitter qayb ka mid ah istiraatiijiyadda dijitaalka ah ee astaantaada. Hadda waa maxay? Waa hagaag, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida loola socdo waxqabadka. Twitter wuxuu siiyaa noocyada helitaanka xoogaa xoog leh Analytics boggeeda, laakiin way fududahay in la isku mashquuliyo dhammaan lambarrada. Si loo ogaado KPI-yada ay diiradda saareyso waa muhiim in lagu kala saaro himilooyinka kanaalkaaga.
Maxaad Doonaysaa Inaad U Adeegsato Twitter-ka?
Adeeg macaamiil toos ah? Lasoco cabirradan:
Celceliska Waqtiga Jawaabta - Tani gabi ahaanba waa inay la mid tahay heerarka warshadaha, laakiin ka gudubida heerarkaasi waa hab lagu kalsoonaan karo oo lagu farxo macaamiishaada. JetBlue ayaa tan ogaaday. Calaamaduhu waxay si joogto ah uga mid yihiin diyaaradaha ugu jawaabta badan iyo waa badanaa la aqoonsan yahay dadaalka ay ku bixisay warshadaha taageerayaasheeda.
Jawaab Qiime - Su'aal kastaa kuma habboona in laga jawaabo, laakiin waa muhiim in la caawiyo kuwa aad awooddo. Tani waa marka qorshaha kor u kaca uu ku imaan karo waxtar.
Fartaada - Tani waxay kaa caawineysaa inaad muujiso haddii su'aalaha halista ah wax laga qabanayo / Qalabyo badan ayaa ku siinaya awood aad kula socoto waxa aad inta badan ka jawaabto. Haddii aad ka jawaabto oo keliya sheegista togan, waxaa laga yaabaa inay noqoto waqtigii aad la qabsan lahayd.
Ololaha Saameynta? Raad-raac tan:
Tirada Tweets vs Tirada Raacayaasha - Kala saar saamileyaasha labadan shuruud isla markaana u huri khayraadkaaga si ku habboon: midka inta badan fariimaha u qora taageerayaasha yar ayaa leh nooc ka mid ah saameynta ka duwan kan dhif iyo naadir ku noqda tweets-ka taageerayaal badan.
Olole lagu gaarayo daawadayaasha cusub? Lasoco cabirradan:
Isticmaalka Hashtag iyo sheegistiisa - Raadinta inta jeer ee loo isticmaalo hashtag, iyo sidoo kale sumadda iyo / ama ololaha xusa, waa hab wax ku ool ah oo lagu cabbiro gaadhista ololahaaga.
Ugu cadcad - Waxbadan kama qaban karaan iibinta bulshada, laakiin waa hab wanaagsan oo lagu cabiro waxa dhagaystayaashaadu jecel yihiin. Ka fikir sida "shaqo fiican". Waxay ka heleen waxyaabahaas, markaa wax badan ka tus iyaga.
Macmacaanka - Marka dib loo soo qoro, waxay asal ahaan ku yiraahdeen, "Waan jeclahay tan waxaanan u maleynayaa inay kuwa kale iyaguna jeclaan doonaan" Tani waa sida saxda ah ee Twitter ay uga caawin karto ballaarinta gaadhistaada dhagaystayaal aad u ballaadhan sidaa darteed iska ilaali inaad raadiso retweets oo aad go'aamiso nooca waxyaabaha ay dhagaystayaashaadu jecel yihiin inay la wadaagaan.
Jawaabaha - Kuwani sidoo kale way fiican yihiin in lagu muujiyo adeeggaaga macaamiisha, taas oo kaa caawin doonta joogteynta wadahadalka tooska ah ee aad la leedahay taageerayaashaada.
Waqtiga maalinta / maalinta ee usbuuca - Tani waxay noqon kartaa mid sahlan oo la iska indhatiri karo. Dhageystayaasha kala duwan waxay leeyihiin caadooyin warbaahineed oo kala duwan, la socoshada waqtiyada iyo maalmaha ugu wax ku oolka badan ee hawlgelinta waa mid muhiim ah marka si fiican loo hagaajinayo waxyaabahaaga Twitter.
U kaxeynta macaamiisha bartaada? Lasoco cabirradan:
Guji URL iyo taraafikada - Twitter wuxuu noqon karaa hab wax ku ool ah oo lagu kaxeeyo taraafikada, kaliya hubso inaad abaabushay hab lagu raad raaco qasabadaha URL adoo adeegsanaya Google Analytics ama qalab la mid ah. Oo hubi sicirka boodhka boggaaga soo degitaanka si aad u hubiso in taraafikada ay u socoto heerarkaaga.
Hadda, kuwani maahan halbeegyada kaliya ee aad ka heli karto waxtar: runtiina waxay kuxirantahay yoolalka aad tilmaantay. Laakiin haddii aad go'aansatay inaad ku ciyaarto twitter-ka xooggiisa gaadhsiinta tooska ah, degdegga ah, iyo saamileyaasha, cabbiraaddani waa meel fiican oo laga bilaabi karo.
Tags: celceliska waqtiga jawaabtatirada dadka raacsantirada farriimaharetweetsTweetfariin ctrTwitterfalanqaynta twitter-kaqiyaasta riix-ka-twitterugu cadcad twittertaageerayaasha twitterhashtags twittersaamaynta twitterSuuqgeynta Twittertwitter ayaa sheegayacabirrada twitter-kajawaabaha twitterheerka jawaabta twitterdareenka twitterwaqtiga twitter-ka maalintiiwaqtiga twitter-ka ee usbuuca
Adam Shigem waa istiraatiijiyad at Diiday - shirkad naqshadeynta dhijitaalka ah ee Seattle. Adam wuxuu leeyahay waayo-aragnimo ka badan 4 sano isagoo ka caawinaya noocyada sida Windows, Office 365, T-Mobile, iyo Brooks Running inay kula xiriiraan dhagaystayaashooda siyaabo macno leh kanaalka badan.
Waa maxay sababta Isbedelada Yar ee Xayeysiinta Suuqgeynta Ganacsiga ee CPG ay u horseedi karaan natiijooyin waaweyn
Seddex Khatar oo Suuq geynta Shirkad wadaag ah iyo sida looga fogaado